Kugara neInvestment yeSwitzerland neGold Visa
Isu tinopa Ehupfumi Kuenda Kunopinda Sevhisi muSwitzerland ye:
● Kugara nekudyara muSwitzerland
● Ugari nekudyara kubva kuSwitzerland
● Visa yegoridhe muSwitzerland
● Pasipoti yechipiri kubva kuSwitzerland
● Kugara nekudyara kweSwitzerland nekudyara muzvivakwa
Best MaAgents ekugara zvakare neInvestment muSwitzerland uye Magweta e Kugara patsva neInvestment muSwitzerland nevashandisi vezvivakwa zveReal Residence zvirongwa muSwitzerland zvinoshanda pamwe chete kuitira kuchengetedza kwevatengi.
Kugara nevemaInvestment vamiririri veSwitzerland vanopa mabasa ekugara nekudyara muSwitzerland, Kugara nehurongwa hwekudyara muSwitzerland, Kugara nehurongwa hwekudyara muSwitzerland, kwechipiri Residency nekudyara muSwitzerland, mbiri Residency nekudyara muSwitzerland, ugari hwekugara nekugara nekudyara muSwitzerland. , Kugara zvechigarire nekudyara muSwitzerland, Kugara kwenguva pfupi nekudyara muSwitzerland, Kugara nehurongwa hwekudyara muSwitzerland, Kugara nehurongwa hwekudyara muSwitzerland, Citizenship nekudyara muSwitzerland, Citizenship nemapurogiramu ekudyara muSwitzerland, Citizenship nehurongwa hwekudyara muSwitzerland, wechipiri Citizenship nekudyara muSwitzerland, hunyanzvi hwekuva Citizenship nekudyara muSwitzerland, pekugara nehugari hwekugara nekudyara muSwitzerland, kugara nekugara nekuva mugari nekudyara muSwitzerland, hupfumi Citizenship zvirongwa muSwitzerland, Ugari nehurongwa hwekudyara muSwitzerland, Citize nship nehurongwa hwekudyara muSwitzerland, yechipiri pasipoti muSwitzerland, yechipiri mapasipoti mapurogiramu muSwitzerland, yechipiri pasipoti chirongwa muSwitzerland, mbiri mbiri pasipoti muSwitzerland, pekugara uye yechipiri pasipoti muSwitzerland, repamutemo repasipoti repasi muSwitzerland, repasipoti repiri nekudyara muSwitzerland, yechipiri ugari pasipoti muSwitzerland, yechipiri pasipoti chirongwa muSwitzerland, yechipiri pasipoti zvirongwa muSwitzerland, goridhe visa muSwitzerland, vhiza dzendarama muSwitzerland, zvirongwa zvegoridhe visa muSwitzerland, chirongwa chendarama vhiza muSwitzerland, chechipiri vhiza yegoridhe muSwitzerland, yechipiri goridhe vhiza chirongwa muSwitzerland, visa mbiri dzegoridhe muSwitzerland, ugari hwemo uye vhiza yegoridhe muSwitzerland, pekugara uye vhiza yegoridhe muSwitzerland, mugari wevisa vhiza muSwitzerland, chirongwa chendarama vhiza muSwitzerland, zvirongwa zvevisa zvegoridhe muSwitzerland.
"1 mira mhinduro" kune yako yese Residency nekudyara muSwitzerland nerumwe rutsigiro.
Minimum Investment muSwitzerland yeResidency nekudyara: CHF 200,000 pagore
Nhanganyaya Switzerland uye Residency neInvestment
Dzidza zvakawanda nezveSwitzerland
Kukura kushoma kweSwitzerland-dunhu rayo rakazara chikamu chikuru cheicho cheScotland — uye ruzhinji rwayo rusina mbiri runopa chiratidzo chidiki chekukosha kwayo pasirese.
Rudzi rwakakomberedzwa rwemakomo anodarika makungwa, makungwa akadzika eAlpine, mipata yakasvibira inoonekwa nemapurazi nemataundi madiki, uye nharaunda dzinobudirira dzemaguta dzinosanganisa yekare uye nyowani, Switzerland ndiyo nongedzo yeakasiyana mamiriro ezvemuviri uye ehukama hwehukama hwekumadokero kweEurope. iwo maviri hunhu hwayo hwakanaka uye mararamiro ayo. Zvikamu zvese zviri zviviri zvave zvirevo kurudzi rwese, iro rine zita kwazvo rinoshevedza mifananidzo yechando rakatemwa Alps vadikanwi vevadzidzi, nyanzvi, vatevedzeri vemifananidzo, uye vanofarira mitambo yemitambo yakazaruka kubva pasirese.
Switzerland iri muWestern Europe locale, ichipa mamiriro ekunze akanakisa emabasa akaverengerwa uye mamwe maitiro akakosha ebhizinesi. Nekuda kwenzvimbo yayo yakatarisana, Switzerland inobatsira nekuve pedyo nenyika dzine simba, semuenzaniso, Germany, Italy neFrance. Pakati pemitsara iyi, Switzerland idanho rekutanga risinganzwisisike remasangano anoda kupinda pamusika weEuropean. Switzerland zvakare inonzwisisika semusika wekuyedza wezvinhu zvitsva kana manejimendi isati yagadzirisa pasarudzo yekukunda iyo yasara yeEurope.
Switzerland yakawana mukurumbira wepamusoro-caliber uye unoshanda kurapwa. Kuenzaniswa neUS zvine mwero, zvisinei, vagari venyika uko mabasa ekurapa akasununguka kana akabhadharwa mari kwazvo vanozowana mwedzi nemwedzi mutengo weiyo inodikanwa yekuchengetwa kwehutano inoshamisa kwazvo. Boka revane pasina mubvunzo rinogona kushandisa anodarika madhora mazana masere pamwedzi wega wega kuchengetedza chaiko, kutariswa kwemazino kwakabviswa. Vagari vese vanofanirwa kuve nekiriniki yekubatanidzwa, uye iwe unopihwa iyo yekutanga mwedzi mitatu yekugara kwako kugadzirisa izvi. Chiyero chekuraira muSwitzerland chakakwirira, zvisinei, zvakaoma, kupfupisa sezvo macanton achipindura chikoro.
Kindergartens inowanikwa mune zvese kunze kwenzvimbo dzakawanda dzenyika uye mahara (anoshanda nekomiti yedunhu). Chero zvazvingaitika, hapana nyika-inomhanya kireshi kana kudzidzisa kwevamwe vana vechidiki; kusavapo kwekuchengetwa kwevana zvine mwero kwevadzidzi vasati vatanga-mudiki ndizvo zvinowanzoitika. Vanotsanangudza vanogara vachitaura pamusoro pe "kumhanyira" kwevana: vechidiki vakapatsanurwa zvinoenderana nekwavo kugona kugona. Nepo kutenderera chiri chinhu chekare chakare-mune mamwe macanton izvi zvinogona kuitika sehudiki segumi kana gumi nerimwe-zvinowanzo kuve chinhu chakakosha kune avo vekare-pat vachengeti. Pfungwa yekuti mudiki anogona kutamira kune rake ramangwana, achiona nzira yake yekuwedzera munzira, haisi pfungwa inowanisa nyasha zhinji pano.
Koreji chikoro ndechevashoma. Vanopfuura makumi manomwe muzana vana veSwitzerland vakagadzirirwa muzvikoro zvehunyanzvi kana chimwe chinhu kune izvozvi. Switzerland inopa sarudzo yakanaka yezvikoro zvisiri zveveruzhinji, zvipo zvakawanda pasirese, Briteni, kana kudzidziswa kwakavakirwa kuAmerican. Zvinodhura, zvirokwazvo, zvisinei, akawanda ane rombo rakanaka expats ane ichi sechinhu chechikamu chavo chekutama package. Kazhinji, nzvimbo dzeSwitzerland dzakachengetedzwa nemaBritish. Ivo vanofungidzira havazofambe vachiuya kwauri kana kukugamuchira iwe kunze kusvikira iwe wavagamuchira. Vaunoshanda navo vanozoita mushe kana iwe ukavagamuchira pamusoro peespresso, pizza, kana chirariro chakabikwa pamukana wekuti iwe unofanirwa kujairana navo zvirinani. Iwe unogona zvakare kutora makirasi emanheru kana kujoina kirabhu yemitambo, uye-pamusoro pezvose-kuwana hunyanzvi nemutauro. Panguva iyo iwe paunowona huwandu hwemikana yekugara yakazadzwa kuburikidza ne "uyo watinoziva sangano," iwe unonzwisisa kukosha kwemunhu kumunhu kutaurirana muSwitzerland nzanga. Edza kusafunga zvishoma nezvazvo. Enda kunharaunda yenharaunda kugona uye iko kuungana kusingafadzi pachikoro chevana, zvisinei nekuti haunzwisise zviri kutaurwa. Kusapinda kwako pasina mubvunzo kuchaonekwa. Sezvingabvira kurudziro huru ine chekuita nekusanganisa ndiko kukurumidza. Iwe unenge wakajairika pasati papfuura maminetsi mashanu mushure menguva yakatarwa. Bhuku reSwitzerland rakagara risingapatsanurike kubva mukurumbira uye hupfumi. Semunhu anogara muSwitzerland, iwe zvakare unogona kuve neSwitzerland ledger. Mabhangi anobhadharisa bhuku uye rechikwereti kana cheki kadhi. Kunyangwe paine dzimwe nzira dzese dzeplastiki dzavanokwanisa kuwana — hunyanzvi hweInternet, kubhadharisa zvakananga, uye kubhengi kwefoni — vazhinji veSwitzerland vanoita kunge vanofarira mari. Kusvika pakupera kwemwedzi wega wega tsamba dzekuchengetedza dzinenge dzichizara nevanhu vanovhara tabo mumari. Kune yakasarudzika chitima dhizaini kuburikidza nerudzi uye yakasimba yeruzhinji mota mukati memaguta nharaunda. Kunyangwe hazvo chokwadi chekuti zvitima zvinotaura zvine mutengo wakanyanya, kunyanya nekadhi rakatarwa pasi, zvifambiso nemota dzematare zvakadhura matikiti chete. Mumacanton mazhinji evana vadiki pane gumi nevaviri vanofamba vakasununguka. Nhoroondo, Switzerland inozivikanwa nekusasarura uye kunyarara. Kunyange zvakadaro, pane diki boka rezvemagariro uye magariro maitiro ekuziva nezve kuvimbisa kugara kwako murudzi irwo runyararo. Unogona kufunga kuti veSwitzerland vanozivikanwa nekuvimbika semhedzisiro ewachi yavo, asi chishuwo chekuve panguva chinomhanya kupfuura icho. Munyika yebhizinesi, kuungana kunotanga chaizvo panguva uye kunoonekwa sekunonoka kunonoka. Chokwadi, kunyangwe mukuzvipira munharaunda, kunonoka kunoonekwa sekusaremekedza.
Zvekutanga zvinyorwa zveResidency neInvestment yeSwitzerland
Chishoma kudyara kwe Kugara nekudyara muSwitzerland
CHF 200,000 pagore
Kugara nekudyara kweSwitzerland
D visa kana Residence mvumo kana Swiss C vhiza
Kuchengetedza nguva yeResidency nekudyara kweSwitzerland
3 kune mwedzi 4
Mushure memakore gumi nemaviri ehupenyu husina kudzongonyedzwa nehunhu
Ugari Hwenyika Hwakabvumirwa vagari vemuSwitzerland
Investment Sarudzo dze Kugara nekudyara kweSwitzerland
> Swiss Residence Chirongwa ("Lump sum tax")
> Swiss Bhizinesi Investor Chirongwa
Nei uchienda kune Residency nekudyara kweSwitzerland
Switzerland inyika yeEuropean inozivikanwa neyakaganhurirwa nyika-yezvemari system, yakanyanya mwero wekugara, dzidzo yakakwana uye hutano, uye kugadzikana kukuru kwezvematongerwo enyika. Switzerland inhengo yedunhu reSchengen, ichisimbisa kufamba-kwemahara kwevagari nemhuri dzavo. Chirongwa chekugara chegoridhe chenyika ino chakanangana nevanhu vakadzidza uye vakabudirira. Inopa kugara kweSwitzerland kune anenge achinyorera iye / yake / yake mhuri mumwedzi 2-4 chete.
Mhuri inopinda muSwitzerland
Iko visa yegoridhe yekushandisa kweSwitzerland inogona kusanganisira vepedyo vemhuri yemunhu anenge achinyorera: mukadzi kana vana vadiki vari pasi pemakore gumi nemasere.
Kugara nehurongwa hwekudyara muSwitzerland insite
Kana iwe uine chinangwa chekunyorera kuSwitzerland yekugara unofanirwa kunge uri pasi pemakore makumi mashanu nemashanu uye usina rekodhi remhosva. Maitiro ekunyorera anosanganisira zvakare kubvunzurudza kwakasimba uye inodzorwa zvakanyanya kupfuura mamwe mapurogiramu egoridhe vhiza. Maitiro acho anokurumidza uye anotora chete kubva pamwedzi miviri kusvika mina pakati pekutumira uye kugamuchira kugara.
Swiss Residence Chirongwa: Pasi pechirongwa ichi munhu anofanirwa kubhadhara CHF 200,000 semubhadharo wemari yemubhadharo kucisson kanton kwaunogara. Zvichienderana nekandoni mari iyi inogona kubva kuCF 400,000 kuenda kuCF 600,000 pagore. Iwe haugone kushanda pasi pechirongwa ichi
Swiss Bhizinesi Rekudyara Chirongwa: Vasiri veEU vemunyika vanofanirwa kuumba kambani nyowani yeswiss kana kuisa mari mukambani yekuSwiss iripo, chero mari yacho isingasviki CHF 1 mamirioni.
Mari inodiwa kuSwitzerland
Ichadikanwa yakaderera huwandu hweCHF 1 mamirioni kuitira kuti uise mari mune pre-yakatenderwa bhizinesi. Iwe unofanirwa kuratidza kuti mari yako inobatsira nharaunda nekuchengetedza mabasa aripo kana kugadzira matsva, kuenzanisa matekinoroji matsva kana kusimudzira kwenharaunda. Iwe unofanirwa kuita investa mudunhu rauri kuzogara, uye iyo mari inofanirwa kuchengetedzwa kwenguva yekugara kwako.
Mutengi kutsigira Residency nekudyara kweSwitzerland
Chikwata chedu che Residency neInvestment Agents kuSwitzerland uye Residency ne Investment Lawyers kuSwitzerland inopa vatengi uye mhuri dzavo muSwitzerland nerutsigiro rwekuva mugari nekudyara kubva kuSwitzerland, kugara nekudyara kubva kuSwitzerland nemamwe mikana yekudyara yekubva kune dzimwe nyika, munyika makumi matatu nenomwe.
Masevhisi edu haana kungogumira mukugara nekudyara kubva kuSwitzerland kana Golden Visa kubva kuSwitzerland kana ugari nekudyara kubva kuSwitzerland kana yechipiri pasipoti, isu tinobatsirawo mune yakanakisa dzimba dzekudyara mikana kubva kuSwitzerland, ichipa mhinduro izere kana iwe uchida kutanga kambani mu Switzerland kana kumahombekombe, zviwanikwa zvevanhu muSwitzerland uye nezvimwe zvakawanda, izvo zvinosanganisira kuronga zvemari nezvimwe zvakawanda.
Kubatsira vatengi vedu nehugari-hwakavakirwa mhinduro mukati uye kubva kuSwitzerland nekugara kwechipiri.
Rutsigiro Rwakakosha kuvagari veSwitzerland:
Isu tinopa zvinodhura Kugara nemabasa ekudyara yeSwitzerland, kuburikidza neyedu inokwanisika mari yekudyara uye yekufambisa mutemo yekuSwitzerland, inokwanisika inivhesitimendi mari yekuenda kune dzimwe nyika vanokumbira kuSwitzerland, inokwanisika Residency nevarairidzi vezvekudyara kuSwitzerland, inokwanisika Residency nemagweta ekudyara eSwitzerland uye inokwanisika yekufambisa yekufambisa femu yeSwitzerland
Kugara nekudyara kubva kuSwitzerland kuenda ku37 Nyika.
Ndarama vhiza muSwitzerland kuenda ku37 Nyika.
Ugari nekudyara kubva kuSwitzerland kuenda ku37 Nyika.
Pasipoti yechipiri kubva kuSwitzerland kuenda ku37 Nyika.
Bhizinesi Kubva kune dzimwe nyika kubva kuSwitzerland kuenda ku106 Nyika.
Kugara patsva nemapurogiramu ekudyara kubva kuSwitzerland.
Goridhe visa zvirongwa muSwitzerland kuenda ku37 Nyika.
Ugari nemapurogiramu ekudyara kubva kuSwitzerland kuenda ku37 Nyika.
Chechipiri mapasipoti mapasipoti kubva kuSwitzerland kuenda ku37 Nyika.
Mapurogiramu ebhizinesi ekupinda munyika kubva kuSwitzerland kuenda ku106 Nyika.
Kugara nekudyara kweSwitzerland kuburikidza neReal Estate
Isu tinopa rutsigiro rwezvivakwa zvezvivakwa muSwitzerland nemaonero ekuti mutengi anofanira kuwana kudzoka kwakanaka mukudyara muSwitzerland, chero nguva, pavanoda kusarudza kubva mukudyara kwakaitwa navo kweKugara kwavo nekudyara kweSwitzerland. Tine tie-up nevashoma varidzi venzvimbo muSwitzerland vane yakanaka track rekodhi uye yavo chivakwa chiri munzvimbo dzakanaka muSwitzerland, kutora zvakanakanaka kudzoka.
Akanakisa edzimba dzimba dzekugara zvirongwa zveSwitzerland nemari yekudyara muzvivakwa muSwitzerland.
Unoda kuziva - Switzerland Kugara neInvestment
Kugara neInvestment Gweta kuSwitzerland kunopa zvakadzama zvinyorwa zvinyorwa kune yako yakabudirira Kugara nekudyara kuSwitzerland. Yedu yakajairwa masevhisi ekugara zvakare neInvestment kuSwitzerland inosanganisira:
Magweta edu anonzwisisa zvaunoda kuti utamire kubva kuSwitzerland kana kuenda kuSwitzerland, zvichibva nekuti ndeapi mazano angaitwa
Isu tinotungamira Kwekutanga Kukoshesa Kushingairira, kugadzirira mushumo usati wakurudzira Residency nekudyara kweSwitzerland kune vatengi kuti vawane Residence Mvumo yeSwitzerland uye kudzora njodzi yekuramba.
Zvichienderana neyakafanira kushingairira mushumo weSwitzerland, isu tinokurudzirawo mamwe mapurogiramu ekubudirira zvirinani.
Kuti isu tifambire mberi neResidency yako nekudyara kunyorera kuSwitzerland isu tingangoda makopi akaongororwa evatengi uye nhengo dzemhuri pasipoti.
Dudziro uye apostile ezvinyorwa Kugara nekudyara kunyorera kuSwitzerland. Magweta edu akasarudzika e Residency nekudyara kweSwitzerland uye vhiza yegoridhe inobatsira nekuzadza mafomu uye zvinyorwa.
Kana yako uye yako yemhuri zvinyorwa zve Residence nekudyara kunyorera kuSwitzerland zvagadzirira, tichazvizadza nezviremera zvakakodzera zveSwitzerland.
Duration: 3 kune mwedzi 4
Kana chikumbiro chako cheKugara nekudyara kweSwitzerland changobvumidzwa, tinogovana nhau dzakanaka newe uye tobva tatanga kugadzirira zvimwe zvinotsigirwa.
Hatitsigire kana kupa Residency nemabasa ekudyara muSwitzerland kune vanotaurwa pazasi Vanhu kana mabhizinesi muSwitzerland:
Residency nebasa rekudyara kuSwitzerland hazvipi kupihwa kune Vatengesi kana vanogovanisa zvombo uye zvombo kubva kana kuSwitzerland.
Residency nezvirongwa zvekudyara zveSwitzerland hazvipi kupihwa kweTechnical kuongororwa muSwitzerland kana maindasitiri espionage emapurogiramu ekudyara mukati kana kubva kana kuenda kuSwitzerland.
Residency nekutsvaga kwekudyara kweSwitzerland hazvipi kupihwa chero zvisiri pamutemo kana zvematsotsi zviitiko muSwitzerland
Residency nerutsigiro rwekudyara kuSwitzerland haisi yevanhu vanobata maGenetic zvinhu muSwitzerland.
Residency nebasa rekudyara kuSwitzerland haisi yemabhizimusi anotengesa zvombo zvine njodzi kana zvine ngozi zvebhagiriya kana zvombo zvenyukireya muSwitzerland.
Residency nechirongwa chekudyara rutsigiro rweSwitzerland haruwanikwe kune vanhu veSwitzerland vanobata mukutengesa, kuchengetedza muSwitzerland, kana kutakurwa kwenhengo dzeVanhu.
Residency nekudyara kuSwitzerland haisi yematare asiri pamutemo ekurera vana.
Residency zvirongwa zvebasa kuSwitzerland haisi yezvitendero uye masangano avo muSwitzerland.
Residency nebasa rekudyara mu Siwizarendi haina kupihwa kune vanhu vanobata mune Zvinonyadzisira muSwitzerland.
Kugara Kwedu magweta muSwitzerland haitsigire bhizinesi rekutengesa muzvinodhaka muSwitzerland.
“Chiziviso Chakakosha : MM Solutions INC inotora chengetedzo inonzwisisika kunyatso gadza AML zvinyorwa zvevatengi veSwitzerland neKYC yavo asi isu hatigamuchire chero mutoro (s) wekurambwa chero kupi zvako kubva kuzviremera muSwitzerland kubvumidzwa kwekunyorera Residency nekudyara muSwitzerland.
Kugara nekudyara muSwitzerland nedzimwe nyika, pamwe nezvimwe zvakawanda zvinotsigirwa.
Isu tinopa yakanakisa Residency nerutsigiro rutsigiro muSwitzerland yekudyara, kutamira kune dzimwe nyika uye kuronga kwezvivakwa muSwitzerland.
Inotsigirwa neInternational Residency neruzivo rwekudyara uye zvinodiwa neSwitzerland zviri pamutemo, tinogadzira mhinduro dzakanakisa.
Yedu Residency nemabasa ekudyara kuSwitzerland inopa mitengo yakachipa kwazvo, ine chinzvimbo chinobudirira cheSwitzerland.
Isu takatora makore eruzivo rwekugara kwevaviri kuSwitzerland vachitsigira vatengi pamwe nemhuri dzavo kuSwitzerland.
Ruzivo rwekugara nekudyara kwekukumbira mari kuSwitzerland nevamiriri vepamutemo veSwitzerland vachipa rutsigiro kune vatengi.
Tine akanakisa magweta nevamiriri veSwitzerland kubata maitiro uye kunyorera avo vakazvipira kubudirira kwako.
Pamberi pekugara kwako kuSwitzerland uye mushure mekubvumidzwa, nhengo yedu yechikwata chepamusoro yaizovapo yebhizinesi kana rutsigiro rwemunhu kuSwitzerland
Isu tine ruzivo rwepasi rese muResidency nekudyara kusanganisira Switzerland, kubatsira vatengi kubva kumativi ese epasi nemasevhisi akanakisa.
Muchiitiko icho, Kugara kwako nekudyara kuSwitzerland kunokundikana, kune dzimwe nyika makumi matatu neshanu dzatinoshandira, isu takagadzirira nehurongwa B.
Verengai mutengo weKugara neInvestment kuSwitzerland
Kuti uverenge mutengo weKugara nekudyara kuSwitzerland ndapota zadza zvese zvese kusanganisira nhengo dzemhuri uye zera ravo. Nekuda kwenhamba huru yevatengi veSwitzerland, isu tinokwanisa kupa masevhisi ari nani nemutengo wakaderera. Kuverenga kuchaita, kunosanganisira, mutengo weKugara nehurongwa hwekudyara kuSwitzerland uye zvimwe zvikwereti.
mhando vhiza kuSwitzerland
Maitiro Ekubvumidza eSwitzerland
Kwekugara kwenguva pfupi muSwitzerland
Permanent Residence muSwitzerland
Embassies uye ma Consulates eSwitzerland
Kugara neInvestment muSwitzerland uye Mamwe maSevhisi
Isu takanyora pasi mashoma mashoma masevhisi atinopa muSwitzerland nekuda kwekukurumidza kana kweramangwana zvinodiwa.
Kana iwe uri kuronga kutamira nemhuri yako kuSwitzerland nekudyara mari, isu semumwe wako kuSwitzerland, tiripo kuti tipe zvakawanda zveimwe sevhisi uye uye kana paungangoda muSwitzerland nemitengo inodhura.
Kunze kweResidency nekutsvaga kwekudyara kweSwitzerland, isu tinopa bhizinesi, IT uye HR masevhisi zvakare muSwitzerland, iyo iwe yausingakwanise kuwana pasi peimwe amburera yakapihwa nevamwe vapi vamazano eSwitzerland ichitigadzira one-stop shop yeSwitzerland nenyika 106.
"Takaisa makore ekuyedza uye pasi rose muZuva 106 kubatsira mhuri, vanhu, uye bhizimusi reSwitzerland mukuzadzisa zvinangwa nezvishuwo zvavo."
Isu tinotsigira yedu mutengi nzira yekupfuura Residency nekudyara kweSwitzerland nerubatsiro rwemagweta edu, vanachipangamazano uye kusunga-siti muSwitzerland nepasi rese.
Tinogona kukubatsira kunyoresa kambani muSwitzerland kana Offshore uye 106 Nyika (Mari yekunyoresa kambani muSwitzerland inodhura nesu.)
Akaundi yeBhangi muSwitzerland
Chero ani investor anotamira kuSwitzerland angazoda akaundi yako yebhangi muSwitzerland uye account yebhangi yekambani muSwitzerland, isu tinogona zvakare kubatsira nemaoffshore bank account.
Peji yekubhadhara muSwitzerland
Kana iwe uchida kubvunza muSwitzerland, ye mhinduro dzemadhijitari muSwitzerland senge yechinyakare kana fintech yekubhadhara gedhi muSwitzerland kana crypto mhinduro, tizivise.
Mushure meResidency nekudyara ku Switzerland kana uchironga ku tanga bhizinesi nekutenga ravepo bhizinesi muSwitzerland kutanga pakarepo muSwitzerland.
HR Services muSwitzerland
Our kambani yevashandi muSwitzerland inogona kukubatsira nekukurumidza kutora vanhu. Iwe unogona zvakare post nzvimbo muSwitzerland vakasununguka.
Nhamba Dzenhare dzeSwitzerland
Bhizinesi foni nhare dzeSwitzerland pamwe ne nhamba dzeSwitzerland Nyika 102 uye Maguta 291.
Zvemari Kuronga Services muSwitzerland
Accounting, kushingairira kwakakodzera muSwitzerland uye zvakawanda.
Virtual Hofisi Kero muSwitzerland
Setup bhizinesi muSwitzerland
Mushure meResidency nekudyara kuSwitzerland, setup bhizinesi mu Siwizarendi.
Isu tinopa pazasi kutaurwa IT mhinduro muSwitzerland
Kugadzira Webhu muSwitzerland
Ecommerce Kuvandudza muSwitzerland
Webhu kuvandudza muSwitzerland
Kuvandudza kweBlockchain muSwitzerland
App Kubudirira muSwitzerland
Software Kubudirira muSwitzerland
Magweta e Residency neInvestment muSwitzerland
Isu tinopa Kugara zviri pamutemo neInvestment mhinduro kuSwitzerland uye kubudirira kwevatengi vedu kwakakosha, kuSwitzerland, isu tiri vatungamiriri, kambani yedu yemutemo yeSwitzerland ine vamiririri vakanakisa vekupinda muSwitzerland, isu tine mukurumbira wekuburitsa yakanakisa vatengi sevhisi yekuSwitzerland ne kujekesa zvine hungwaru mhinduro dzekudyara kweSwitzerland vanhu uye mhuri. Kugara kwedu neboka rekudyara kuSwitzerland kunopa mhinduro dzakagadziriswa dzekubudirira kweMutengi.
Nhengo dzemhuri yako (vana, mukadzi, vabereki) vanokodzera kupihwa mvumo yekugara kuSwitzerland, pamvumo yako yekugara muSwitzerland inogamuchirwa.
Simba regweta kuSwitzerland rinodikanwa kune ese matanho epamutemo pachinzvimbo chako neResidency nevagadziri vekudyara muSwitzerland. Kana iwe uri muSwitzerland kana uronga kushanyira Switzerland, tinogona kuwana simba rako regweta pano.
Isu hatibhadhare yakawedzera yekuwana Simba regweta. Kana iwe uchironga kutanga kunyoreswa kwekambani kweSwitzerland iri kure, simba rako regweta rinofanirwa kuve rakanyoreswa zviri pamutemo kuti rishandiswe mundima yeSwitzerland. Zvichienderana nenyika yaunogara, inofanirwa kuve yakatendeka kana kunyoreswa zviri pamutemo nemumiriri weSwitzerland.
Inowanzo Bvunzwa Mibvunzo - Kugara neInvestment muSwitzerland
Ndeipi tsananguro yekugara nekudyara muSwitzerland?
Kugara nekudyara kuSwitzerland, kunogona kutsanangurwa sekuti, kuwana ugaro hweSwitzerland kuburikidza nekudyara muhupfumi hweSwitzerland kuburikidza nenzira dzakasiyana senge, bhizinesi, zvivakwa, zvisungo zvehurumende, nezvimwe. Nyorera kuti ugare nekudyara kuSwitzerland, ugari hwemo nehurongwa hwekudyara kuSwitzerland. inotsigirwa nekugara nenzvimbo dzekudyara kuSwitzerland, kuburikidza nekugara kwedu kwakanakisa nemagweta ekudyara muSwitzerland, kugara kwakanyanya nemagweta ezvekudyara muSwitzerland uye kugara kwakanyanya nevanoona nezvekudyara kuSwitzerland, vachishanda pekugara zvakanakisa nevamiriri vezvekudyara muSwitzerland, uye mafemu akanakisa ekuona nezvekupinda munyika. muSwitzerland.
Kugara patsva nemabasa ekudyara kuSwitzerland | Kugara patsva nevamiriri vezvekudyara muSwitzerland | Kugara patsva nemagweta eInvestment muSwitzerland | Kugara nemagweta ekudyara muSwitzerland | Kugara nevezvekudyara mari kuSwitzerland
Ndeipi tsanangudzo yekuva mugari nekudyara muSwitzerland?
Citizenship nekudyara kuSwitzerland, inogona kutsanangurwa se, kuwana ugari hweSwitzerland kuburikidza nekudyara muhupfumi hweSwitzerland kuburikidza nenzira dzakasiyana senge, bhizinesi, zvivakwa, zvisungo zvehurumende, nezvimwe muSwitzerland. Nyorera kuva mugari wemo nekudyara kuSwitzerland, ugari nehurongwa hwekudyara kuSwitzerland inotsigirwa nehugari hwemo nevekudyara masevhisi eSwitzerland, kuburikidza nehukama hwedu hwakanakisa nemagweta ekudyara muSwitzerland, ugari hwakanakisisa nemagweta ezvekudyara muSwitzerland uye kuva mugari wakanakisa nevanopa mazano ekudyara kuSwitzerland. kuva mugari wakanakisa nevamiririri vezvekudyara muSwitzerland, uye akanakisa mafemu ekubvunza vanoenda kune dzimwe nyika muSwitzerland.
Affordable Investor immigration services kuSwitzerland | Vanodhura vanoenda kune dzimwe nyika vanokumbira muSwitzerland | Vanodhura varidzi vemari vanoenda kune dzimwe nyika muSwitzerland | Vanodhura varidzi vekupinda munyika magweta muSwitzerland | Vanodhura varidzi vemari vanoona nezvekupinda muSwitzerland | Affordable immigration law firms kuSwitzerland
Ndeipi tsananguro yepasipoti yechipiri muSwitzerland?
Yechipiri pasipoti muSwitzerland, inogona kutsanangurwa sekuti, kuva mugari wepamutemo weSwitzerland kuburikidza nekudyara muhupfumi hweSwitzerland kuburikidza nenzira dzakasiyana senge, zvivakwa, bhizinesi, zvisungo zvehurumende, nezvimwe. Nyorera pasipoti yechipiri kuenda kuSwitzerland, yechipiri pasipoti chirongwa cheSwitzerland chinotsigirwa wechipiri pasipoti masevhisi eSwitzerland, kuburikidza nemagweta edu epiri epasipoti akanakisa muSwitzerland, magweta echipiri epasipoti muSwitzerland uye akanakisa echipiri mapasipoti mazano eSwitzerland, anoshanda kumahofisi echipiri epasipoti muSwitzerland, uye akanakisa mafemu ekubvunza vanoenda kune dzimwe nyika muSwitzerland.
Chechipiri pasipoti masevhisi eSwitzerland | Chechipiri pasipoti vamiririri muSwitzerland | Yechipiri mapasipoti magweta muSwitzerland | Yechipiri mapasipoti magweta muSwitzerland | Chechipiri pasipoti vanopa mazano kuSwitzerland
Ndeipi tsananguro yegoridhe visa muSwitzerland?
Ndarama vhiza muSwitzerland, inogona kutsanangurwa sekuti, kuwana mvumo yekugara muSwitzerland kuburikidza nekudyara muhupfumi hweSwitzerland kuburikidza nenzira dzakasiyana senge, zvisungo zvehurumende, bhizinesi, zvivakwa, nezvimwe. Nyorera vhiza yegoridhe kuSwitzerland, chirongwa chendarama vhiza yeSwitzerland inotsigirwa goridhe vhiza masevhisi eSwitzerland, kuburikidza neyedu akanakisa egoridhe vhiza magweta muSwitzerland, akanakisa egoridhe vhiza magweta muSwitzerland uye akanakisa endarama vhiza ma consultant eSwitzerland, vachishanda pane akanakisa egoridhe vhiza vamiririri muSwitzerland, uye akanakisa ekupinda kwevanoona mafemu muSwitzerland.
Goridhe visa services kuSwitzerland | Ndarama vhiza vamiririri muSwitzerland | Magoridhe vhiza magweta muSwitzerland | Magoridhe vhiza magweta muSwitzerland | Ndarama vhiza vanopa mazano kuSwitzerland
Ndechipi chidiki chekudyara kweResidency nekudyara muSwitzerland?
Pashoma kudyara kweResidency nekudyara muSwitzerland ndeye CHF 200,000 pagore.
Iwe unopa rubatsiro rwepamutemo kuSwitzerland yeResidency nekudyara?
Ehe, gweta redu muSwitzerland nevamiriri muSwitzerland vanopa rutsigiro rweKugara nekudyara muSwitzerland.
Kugara nekudyara kuSwitzerland kunodhura here?
Mutengo weKugara neInvestment kuSwitzerland uye Residency nemari yekudyara inodiwa kuSwitzerland ndeye yakakwira mambure akakosha vanhu, isu tinobhadharisa chete mari yekubvunzana yeResidency neInvestment kuSwitzerland, isu tinopawo yakawanda zvimwe zvinotsigira zveKugarazve neInvestment mhinduro.
Ndeipi nyika vagari vanogona kunyorera Residency nekudyara kuSwitzerland kana investor visa kuSwitzerland?
Kugara patsva nemabasa ekudyara mari anogona kushandiswa nevagari venyika chero ipi asi mienzaniso mishoma ndeyeKugara nekudyara kuSwitzerland kubva kuAsia, Kugara nekudyara kuSwitzerland kubva kuAfrica, Kugara nekudyara kuSwitzerland kubva kuEurope, Kugara nekudyara kuSwitzerland kubva kuSouth America, Kugara nekudyara kuSwitzerland kubva kuMalaysia, Kugara nekudyara kuSwitzerland kubva kuBangladesh, Kugara nekudyara kuSwitzerland kubva kuIndonesia, Kugara nekudyara kuSwitzerland kubva kuSri Lanka, Kugara nekudyara kuSwitzerland kubva kuNepal, Residency nekudyara kuSwitzerland kubva kuIndia neResidency. nekudyara kuSwitzerland kubva kuUAE.
Professional Residency neInvestment Guidance kuSwitzerland
Kumbira kubvunza Mahara kune yako Residency neInvestment kuSwitzerland
Mazwi akakosha muRudzi rwekugara neInvestment yeSwitzerland
Swiss Federal Commerce Registry
Federal Hofisi yeStatistics
Swiss Federal Njanji
Swiss Federal Statistical Hofisi
Swiss Federal Hurumende Zviremera
Swiss Federation yeZvikoro Zvega
Official kosi bhuku reSwitzerland Federal Hofisi Yezvekutakura
State Secretariat Yekutama
Swiss Yezvemari Musika Wekutarisisa Chiremera
Zurich Relocation AG
Swiss portal yeConfederation, cantons uye manisiputa
Swiss Inishuwarenzi Partner
Link to Dhipatimendi Rekupinda muSwitzerland , vane basa rekuumba marongero ekuchimbidza Immigration muSwitzerland